Qaxooti yimid Berbera - BBC News Somali
Qaxooti yimid Berbera
Dekedda magaalada berbera waxaa ku soo xidhay duhurkii maanta markab sida 1238 qof oo ah qaxooti Soomaali ah, oo ka soo cararay dagaallada iyo duqeynta diyaaradaha ee maalmahan danbe ka socda dalka Yemen.
Maareeyaha guud ee dekeda berbera Eng Cali Xoorxoor oo ka mid ahaa masuuliyiinta Somaliland ayaa dadkan qaxootiga ah ku qaabilay dekedda. Wuxuu BBC u sheegay in xilligan oo kuleyl ah ay u fidiyeen dadkaasi markii ay soo dejiyeen adeegyadii ay baahnaayeen.
Dadkan qaxootiga ahi waxay u badan yihiin dadkii Soomaalida ahaa ee ku jiray xeryaha qaxootiga ee dalka Yemen. Waxaa la dejiyay xarun ay ku nastaan saddex maalmood magaalada Berbera kadibna waxay u kala ambabaxayaan gobollada koonfurta Soomaliya.
Maareeyaha guud ee Dekedda Berbera wuxuu sheegay, in ilaa iyo intii uu bilowday dagaalka dalka Yemen bishii April ee sanadkan 2015, ay dekedda Berbera soo gaareen dad qaxooti ah oo gaaraya ilaa sagaal kun oo qof oo isugu jira Soomaali iyo Yemen.